Seza Kid |
Seza zaza, seza kely 1618 ...
Seza plastika F805 #
Haben'ny vokatra: 55 * 48 * 82.5cm
Fitaovana: Polypropylene + metaly namana
Fonosana: 4pcs / CTN
MOQ: 200pcs / loko
Fanaka mora vidy eto an-jaridaina mora vidy - Sarany manokana ho an'i China Modern Plastika fisakafoanana kafe fisotroana kafe - Forman
Ny fijoroana isa azo ekena tsara sy mahafinaritra dia ny fitsipiky ny anay, izay hanampy anay amin'ny toerana ambony. Manaraka ny foto-kevitry ny “kalitao voalohany, mpividy faratampony” ho an'ny vidiny manokana ho an'i China Modern plastika PP fisakafoana kafe fisotroana kafe, nanome toky izahay fa raha tsy faly ireo mpiantsena amin'ny kalitaon'ny vokatra dia afaka miverina ao anatin'ny 7 andro miaraka amin'ny tany am-boalohany ianao Hoy ny. Tompon'andraikitra ambony ...
Seza fisakafoanana mihinana ahitra vao avy tonga - Seza plastika 1681 # - Forman
Latabatra ambany latabatra latabatra - latabatra fisakafoana-T6 - Forman
Ny vokatra dia mampifangaro ny maoderina maoderina sy ny indostrialy indostrialy amin'ny fironana famolavolana ankehitriny mba hamoronana sombin-javatra tsy manam-potoana izay hanome voninahitra ny haingon-trano rehetra. Ny vokatra, Solid Wood Legs, in White dia manome fikitihana maoderina ho an'ny faritra fisakafoanana ao an-dakozia, na izay toerana ilana latabatra accent. Ny tampon'ny hazo maoderina maoderina dia mifangaro tsara amin'ny haingon-trano rehetra, raha ny tongotr'ilay latabatra kosa vita amin'ny hazo voajanahary matanjaka ary misy sakany azo ahitsy azo apetaka amin'ny gorodona ...
Kalitao avo amin'ny seza mora vidy - CHAIR PLASTIC - 1765 # - Forman
● Ny tombotsoantsika: manana mari-pankasitrahana momba ny patanty amin'ny ankamaroan'ny vokatray izahay. Afaka manome tatitra momba ny fitsapana EN12520 isaky ny vokatra izahay. Misy ny kaomandy OEM. Ny orinasanay dia manana mari-pankasitrahana BSCI sy SGS. Manamboatra atrikasa famokarana. Kalitao avo lenta sy serivisy tsara indrindra & vidiny tsara ● Ny ozinina sy ekipanay: Tianjin Forman Furniture dia orinasa mpiorina any avaratr'i China izay natsangana tamin'ny taona 1988 izay manome seza sy latabatra fisakafoana. Forman dia manana ekipa fivarotana lehibe manana matihanina mihoatra ny 10 ...
Seza mpanamboatra OEM - Seza plastika - F803 # - Forman
Mpamatsy azo itokisana latabatra fisakafoanana fotsy azo atolotra - latabatra fisakafoana-T2 - Forman
Tianjin Forman Furniture dia orinasa mitarika eo avaratr'i Sina izay natsangana tamin'ny taona 1988 izay manome seza sy latabatra fisakafoana. Forman dia manana latabatra fisakafoanana tsara tarehy marobe atolotra. Na mitady endrika maoderina afaka miditra amin'ny efitrano kely kokoa ianao, na latabatra lehibe sy nentim-paharazana misy habaka ho an'ny fianakaviana manontolo sy maro hafa, ao Forman dia hararaotina ianao amin'ny safidy. Ny latabatra fisakafoana dia iray amin'ireo fanaka lehibe indrindra ao an-tranonao - indrindra ny manodidina ny ...
Latabatra kafe misy vera sy metaly tsara indrindra - latabatra boribory, kely, loko 2 T-32 # - Forman
Ny latabatra manodidina dia mampifangaro endrika ivelany miaraka amina endrika amam-bika sy tsotra. Ny mpamorona dia te-hamorona latabatra sariaka sy milamina ary maharitra izay mitazona ny kaopy kafe tsy hianjera amin'ny tany - izany no antony namoronany sisiny kely manodidina ny takelaka. Ny habe samihafa amin'ny mpivady latabatra dia miaraka mora foana ary mijery tsara ihany koa.
Toeram-pisakafoanana mivantana seza haingana - Seza plastika-1698 - Forman
Ity seza ataon'ny mpamorona malaza ity dia mihoatra ny seza plastika rehetra miaraka amina endrika miavaka ankehitriny. Noho ny toeran'ny fihodinana alohan'izay dia manome seza ergonomika koa izy io. Ity seza ity dia misy loko maro karazana. Azo apetaka izy io ary azo averina 100% ihany koa. Tsy misy olona, ​​rehefa mijery ny seza plastika azo raisina Forman, afaka maminavina ny fandrosoana ara-teknolojia izay tsy maintsy namboarina mba hahatonga ity fanaka ity ho tena izy. Tsipika mahitsy ampiarahina amin'ny miolakolaka madio mak ...
Fivarotana mafana latabatra kafe vera mainty - latabatra boribory, kely, loko 2 T-32 # - Forman
OEM / ODM Seza China ho an'ny efitrano fisakafoanana maoderina - CHAIR PLASTIC - 1682 # - Forman
Tongasoa eto amin'ny fialan-tsasatra. Drafitra dia ny fanahy ho an'ny seza plastika. Ity seza ity dia manana tsipika kanto sy nentim-paharazana izay manao fanambarana nefa tsy manadino ny habaka. Ampifanaraho amin'ny seza fisakafoanana ity seza fisakafoanana ity ho an'ny fipetrahana mahazatra sy fisakafoanana voadio. Ny tsara indrindra, ny tsara indrindra, ny fitaovantsika dia tsy mandray ny hamandoana ary mandroaka ny loto sy ny fotaka, mampisy rivotra madio. Ny fisakafoanana misaraka dia azo vidiana koa hanitarana ny setanao.Hidino ny tsipika an'ity vokatra ity handrindrana ny bea hafa ...
2020 China New Design Garden Seza ivelany - Vidiny manokana ho an'ny China Modern Plastika PP Restaurant Coffee Bar Seza - Forman